The Gardener: သောကြာ
ပြန်မရောက်တော့တဲ့လမ်းသွယ်လေးကို စိတ်ထဲက ငေးကြည့်ရင် ပိုလှတယ်။
ငွေထုပ်၀၀ကြီးဟာ မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို ဖြတ်လတ်ပေါ့ပါးစေတယ်။
သံကုတင်တွေကို အခင်းအကာ လှပစေတယ်။ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေတယ်။
သေခြင်းတရားကိုတောင် ရက်အတန်ကြာအောင် ၀င်ခွင့်ပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်။
ကိုယ့်မှာ လူလူသူသူ ရောဂါကြီးကြီးတစ်ခုရှိရင်ကောင်းမှာ။
Biopsy လုပ်ထားရတဲ့ ကဗျာက ပြောတယ်။
ဈေးမကောင်းတဲ့ ပညာကို သင်ယူခဲ့ရလို့
နူးညံ့တဲ့ ရူးသွပ်မှုဟာ အောင်မြင်စွာ ရူးသွပ်ခြင်းလို
မနက်ခင်းကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့ လက်ချောင်းတွေမှာ
မနက်ခင်းမှာ ဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့ မျက်လုံးတွေမှာတာ့
သံသရာအဆက်ဆက် .... ၊
တန်ဖိုးမရှိတာကောက်သိမ်းတတ်တဲ့ အကျင့်ကို မိစ္ဆာ အကျင့် ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုပို့ တစ်ယောက်တည်းဆက်လက်ထွက်ခွာ၊ အလွမ်းသီချင်း ဆိုညည်းလေ့မရှိ၊ အလေ့ကျပေါက်ရောက်သော သစ္စာတရားများ၊ နာဖျားနေတဲ့လူအတွက် အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုမလိုသလို၊ မချစ်တော့တဲ့သူအတွက် အလွမ်းကဗျာတစ်ပုဒ်လည်းမလိုဘူး။ ဒါဟာ ကဗျာမရေးချင်ရခြင်းအကြောင်းတရားပေါ့။ သိပ်ကို ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကဗျာများအားဖြင့် ပိုသည်းထန်မှာကို မလိုလားတဲ့ သွေးရိုးသားရိုး စေတနာပေါ့။ ကဗျာဟာ ဒဏ်ရာတွေရဲ့ တခြားသော အမည်နာမလည်းဖြစ်တယ်။ ဒဏ်ရာတွေဟာ ပင်နိယံတစ်ခုနဲ့တူပြီး ကဗျာကတော့ တိုက်စားပွန်းပဲ့သွားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများပဲပေါ့။
မြန်ဆန်တဲ့ဖွင့်ဆိုမှုတွေနဲ့ ဆက်လက်ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့ကဗျာတွေ တစ်စတစ်စများလာတယ်။ ဇီဝကဟာ တွေ့တဲ့အပင်နဲ့ဆေးကုတယ်။ သူကဗျားရေးရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ က၀ိပစ္စည်းမဟုတ်တာတော့ကြာပြီ။ ကဗျာဟာ အနာတွေလိုရင်းလာ၊ ခွဲစိတ်ကြ၊ ထုတ်ပြကြ၊ စုတ်သတ်ကြ၊ ကဗျာဟာ ကဗျာအဖြစ်မှ နန်းဆင်းပေးရသလိုလို၊ ကဗျာဟာ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်က မီးလောင်လို့ ထွက်ပြေးရသလိုလို၊ မထင်မရှားတစ်နေရာလေးမှာ ဇာတ်မြုပ်လို့ဆိုတာတွေဖြစ်လာ၊ ကဗျာသေပြီ၊ တောင်အောက်ပြုတ်ကျသွားပြီ၊ တရားအရှာထွက်သွားပြီ၊ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီစတဲ့ အက်ဆေးတွေထွက်လာ၊ ကဗျာမရေးတတ်သူတွေဟာ ကဗျာအကြောင်းအကျယ်ဆုံးပြောတဲ့သူတွေဖြစ်နေခဲ့တာဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်။ ဒါကို ငါတို့က inferiority complex ထဲပစ်ထည့်လိုက်တာကြာပြီ။
တကယ်လို့ ငါက ကဗျာကို မြန်နှုန်းမြှင့်ရေးသားမယ်ဆိုရင်း စာသားဟာ တစ်နေရာမှာ ပြုတ်ကျကျန်ရစ်သွားမယ်။ စာသားကို စွန့်လိုက်တဲ့ကဗျာဟာ ငြိတွယ်မှုကို စွန့်လိုက်တဲ့ယောဂီလို ပေါ့ပါးသွားမယ်။ ကဗျာဟာ ဘယ်သူ့အတွက်ရေးတာလဲ။ ဟိုက္ကုလို၊ ဒိုဟာလို ကဗျာဟာ ကဗျာလား။ တစ်ကိုယ်တည်းလွမ်းဖွယ်ဟာ ကဗျာလား၊ လေးလုံးစပ်ဟာ ကဗျာလား၊ ဆန့်ကျင်ရေးသားခြင်းဟာ ကဗျာလား ... ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံး ခုတ်ထစ်ပစ်လိုက်ခြင်းဟာ ကဗျာလား၊ သိစိတ်အလျဉ်ရေးခြင်းဟာ ကဗျာလား၊ တဖျပ်ဖျပ်လက်နေအောင် ငွေမှုန်လေးတွေကပ်ထားတာဟာ ကဗျာလား၊ ဘယ်သီအိုအရ ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ကဗျာဆရာလို့ ကျိန်းသေလိုက်ရတာလဲ၊ ဆိုက်ကားသမားမှာ နင်းပြစရာ ဆိုက်ကားရှိသလို ကဗျာဆရာမှာလည်း နင်းပြစရာ စကားလုံးတစ်ချို့ရှိမယ်။ ဆိုက်ကားသမားဟာ ဆိုက်ကားဆရာဖြစ်လာသလို၊ ကဗျာဆရာဟာ ကဗျာသမားဖြစ်လာတယ်။ ဆရာ သမားတွေဟာ Magazine မှာ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်လို စုပြုံနေထိုင်ကြရတယ်ကြားတယ်။ အယ်ဒီတာတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ကြောင့် ကဗျာတွေဟာ ကဗျာဖြစ်ခွင့်မရဘူးလို့ဆိုတယ်။
မြန်မာစာပေလောကမှာတော့ ဖတ်ပြီးသားပြန်ပြောတာဟာလည်း ဆရာကျတယ်။ ဆရာဝီကီ၊ ဆရာ တော်ကီ၊ ဆရာဘော်ဘီ တို့ဟာထင်ရှားတယ်။ ဆရာဖြစ်ပြီဆို တန်းညှိလို့မရတော့ဘူး။ ဆရာကထန်းပင်အမြင့်ကြီးကို ဆာကူရာထိပ်မှာစိုက်ပြီး ထိပ်ဖျားမှတက်နေတယ်။ ပြန်မဆင်းတော့ဘူး။
ကဗျာဟာ သားလျောပြီးခါစ ၀မ်းဆက်သွားနေသလို အင်အားမျိုးနဲ့ ၂၁ ရာစုကိုကူးခတ်နေတယ်။ ကဗျာမသေဘူး ... ဒါပေမယ့် ဆိုပြီး အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ရေးမယ်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ကဗျာဖြစ်နေစေတာ စာသားမဟုတ်တဲ့တခြားတစ်ခုခုဖြစ်နေမလား။ မရေးထားရသေးတဲ့ကဗျာဟာ ရေးပြီးသားတွေထက်ကောင်းတယ်။ အမှတ်တရထုတ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဗလာစာအုပ်လေးဟာ ကဗျာစာအုပ်လေးဖြစ်ရင် ကဗျာဟာ ဗလာလည်းဖြစ်တယ်။
ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဟာ အညောင်းဆန့်တယ်။ ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ကြောင်ကလေး၊ ထိပ်ကွက်လို့ခေါ်တယ်။ ကြွက်မခုတ်တတ်ဘူး။ ကဗျာစာအုပ်တွေကို ကုတ်ခြစ်တယ်။ ၀ရံတာမှာထွက်အိပ်တယ်။ ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ကြောင်ကလေး လေးဖြူလို့ခေါ်တယ်။ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားတယ်။ မနာလိုဝန်တိုစိတ်များတယ်။ သဲတွေနဲ့ဆော့တယ်။ ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ကြောင်ကလေး Milo လို့ခေါ်တယ်။ အတောင်ပံတွေပါတယ်။ အဝေးတစ်နေရာမှာနေထိုင်တယ်။ ကိုယ်မမြင်ရပေမယ့် ကိုယ့်ကို သူမြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်။ မကြာမကြာကုတ်ခြစ်တယ်။ မျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ကလေး Yellow လို့ခေါ်တယ်။ လေတွေကိုစားနေသလို ပါးစပ်တလှုပ်လှုပ်နဲ့၊ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာတွေထက် ပိုလွန်တဲ့ သတ္တ၀ါလေး ... မကြာမကြာကုတ်ခြစ်တယ်။
သေသေချာချာကြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမှားထားတဲ့ အခုလိုစာမျိုးကိုကြတော့ ခင်ဗျားတို့ကထင်မယ်။ ဒါဟာ မော်ဒန်တဲ့။ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ကွန်တမ်ပိုရာရီတွေထဲကတစ်ခုပဲ။ Patchwork ကို Art နဲ့ပေါင်းရင် PatchArtwork ဆိုတာရတယ်။ ဒါကို နားလည်ဖို့မလိုဘူး။ ခံစားလို့ရတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ရုံပဲ။ ဒူးရွှန့်ရဲ့ ရေပန်းလိုပေါ့ .. သိပ်ကို ပြောင်မြောက်တဲ့ လက်ရာတစ်ခုပေါ့လို့ သူမဟာ နှစ်ထပ်မေးကြီးနဲ့ ငေါ့ပြီးပြောလေရဲ့။ ။
:Thanks Xanthos for your knowledge :)။ Hope you will be get well soon.
My dear friend,x for xanthos is sick and this post is for him.
Takeagood rest for the whole month.
Life is the fast lane buddy, don't jump out of it (: .
Labels: friday thought, patchwork